Dawladda Imaaraadka Carabta Oo Bilaabaya Dhuun Saliida Ethiopia Uga Soo Qaada Dekeda Asab | Awdalmedia.com
Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay bilaabi doonto Dhuun Saliida Ka soo qaada Dekeda Asab ee wadanka Eritrea, taas oo keeni doonta Magaaladda Addis Ababa.
Sida ay ku warantay warbaahinta FANA ee wadanka Ethiopia, heshiiskan ayay wada gaadheen labada wadan ee Imaaraadka carabta iyo Ethiopia.
Imaaraadka carabta ayaa door laxaad leh ka qaatay sidii loo dhamaystiri lahaa colaadii 20ka sano u dhaxaysay wadamada Ethiopia iyo Eritrea oo dhawaan qalinka ku duugay heshiis iskaashi oo dhex mara labada wadan.
Arrintan ayaa ah mid ay labada wadan ee Eritrea iyo Ethiopia ka faa’iidaysan doonaan, waxaana u bilawday xidhiidh aad u wanaagsan.
Ethiopia ayaa isticmaali doonta Dekeda Magaaladda Asab, waxaana sidoo kale ay hore heshiisyo ula gashay Ethiopia wadamada Geeska ku yaala Ee Somaliland, Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo Suudaan, kuwaas oo ay ka faa’iidaysan doonto Dekedahooda.